Naseho ny : 24 marsa 2021
Ny fitiavan-tanindrazana dia azo hadika ho fampandrosoana ny tanindrazana niaviana. Ny andron'ny 29 marsa dia tsy ampy hampahalalana ny maro ny atao hoe fitiavan-tanindrazana noho izany dia manana adidy ireo mpisehatra ao anatin'ny telozoron'ny fanabeazana. Ny raiamandreny, ny mpampianatra, ny mpianatra dia manana zavatra mampiavaka azy ho fanehoana ny fitiavan-tanindrazana. Ny raiamandreny no mpanabe voalohany indrindra ka izy no hiaingan'ny fampianarana ny atao hoe fitiavanan-tanindrazana, isan'izany ny fomban-drazana sy ny fomba isam-paritra...
Vehivavy mizaka tena...
Naseho ny : 17 marsa 2021
Tsy andro fety ny 8 marsa fa andro manerantany hatsiarovana ny fitakian-jo. Loha-hevitra tamin'ity taona ity: Vehivavy mizaka tena sy miarin-doha anaty tontolo iainana mirindra ho amin’ny fandrosoana lovainjafy. Ny vehivavy dia afaka mampandroso ny firenena araka ny toen-tsaina ananana, ary afaka mampita izany amin'ny taranaka. Vehivavy mizaka tena mira mahefa, mifanampy amin'ny lehilahy...
Te hihena na te hitombo...
Naseho ny : 10 marsa 2021
Ny tanjona dia ny hampihenana na hampitomboana ny ampahany na ny vatana izay fototry ny fahasalamana. Ny toe-batana vaventy na manifinify dia mety ho vahana nolovaina ary ilàna ezaka ny hiazomana azy. Tahaka ny olona manana tanjona rehetra dia mila vonona hiezaka ianao, handamina ireo korontana fototry ny tsy fahasalamana...
Ny manandanja sy ny laharam-pahamehana
Naseho ny : 3 marsa 2021
Omeo lanja hatrany izay efa manandanja aminao hatramin'izay. Mila manontany tena isika. Raha te ho vahaolana dia ilaina ny mametraka ny zavatra rehetra amin'ny toerany sahaza azy araka ny lanjany. Matetika isika dia very amin'ny hamehana ary manadino ny manandanja. Raha ny fahamaikana no hatao fiainana dia tsy ho tafita isika...
Pejy 3 amin'ny 13